Ukuqokelela i-Easy Crystal Growing Recipes
I-recipe ethembekileyo nelula ekhulayo i-Crystals
Ukukhula kwamakristali ngokwakho kunokuba lula! Nantsi iqoqo yeephepheni zeekristal ezilula ukuzama.
Khulisa iikristst ekhanyayo i-borax ngenhliziyo ye-chenille ukwenza intliziyo enhle ye-crystal. Anne Helmenstine
I-Borax yikhemikhali ethengiswa njenge-booster yokuhlamba impahla kunye nokulawulwa kwezinambuzane. Dissolve borax emanzini atshisayo ukuvelisa iikristali ngobusuku. Ezi kristali zikhula ngokukhawuleza kubaputi, ngoko ke unokwenza iintliziyo ze-crystal , i-snowflakes okanye ezinye iimo.
3 isipuni se-borax
1 inkomishi yamanzi abilayo
I-Borax Crystal Heart
I-Black Borax Crystals Okunye »
I-Crystal Window Frost
Le projekthi ekhulayo yekristal ivelisa iikristali kwimizuzu embalwa. Lungisa isisombululo esingaqhelekanga sesikristal sokususa kwiifestile, izibuko okanye enye indawo ukuze uvelise i-crystal "iqhwa".
I-1/3 indebe ye-Epsom ityuwa
I-1/2 indebe yamanzi ashushu
1 ithisipuni yamanzi isepha yokuhlamba
Imiyalelo ye-Crystal Frost | I-Crystal Frost Ividiyo ngakumbi »
Izixhobo ze-Crystal zeFriji
Le projekthi isebenzisa amanzi aphephethileyo, kungekhona amanzi abilayo, ngoko kukukhuselekileyo kubalimi abancinci be-crystal. Beka isisombululo sekristal kwiqrijini kwaye ufumane i-crystals ezinjengezitshixo ezincinane kwiminithi embalwa ukuya kwiiyure ezimbalwa. Yinto elula!
I-1/2 indebe ye-Epsom ityuwa
I-1/2 indebe yamanzi yipompo eshushu
Ifriji Crystal Imiyalelo Ngaphezu »
I-crystal i-geode yelityuli yayilula ukuyisebenzisa kwaye isetyenziselwa kuphela izithako zekhitshi eziqhelekileyo. Anne Helmenstine
Iimpawu zezemvelo zifuna amawaka eminyaka ukuba zenze, kodwa kuthatha iintsuku ezimbalwa ukwenza i-geode ngokwakho. Le geode ikhula kwi-calcium carbonate, okuyi-eggshell nje. Iikristali zi-khabri ezihle zetyuwa. Unokushiya ikhestri ngokucacileyo icacise okanye ungeze umbala wokutya ngombala.
Funda imiyalelo epheleleyo . Kaninzi "
Lezi zikhuni eziluhlaza okwesibhakabhaka sulfate pentahydrate, eyaziwa ngokuba yi-copper sulphate pentahydrate e-UK. Anne Helmenstine
I-Copper sulfate crystals ikhula ngokulula, kunye neyendalo eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomkhwa wesicristal. I-copper sulfate ifumaneka ngokulula kwi-intanethi okanye ungayifumana kwezinye izitolo ezithwala ingcambu yokubulala okanye i-algicides esebenzisa i-sulfate yethusi njengesiseko sayo esisisiseko.
Amanzi okutshisa kakhulu
I-Copper Sulfate Instructions | I-Copper Sulfate Timelapse Ividiyo ngakumbi »
Amalenta e-Ammonium Phosphate elula
Kukho isizathu se-monoammonium phosphate yikhemikhali efakwe kwiikiti ezikhulayo ze-crystal! I-Ammonium phosphate inokwenziwa kunoma yimuphi umbala kwaye ibonisa umkhwa wesitrato othakazelisayo.
6 isipuni se-monoammonium phosphate
I-1/2 indebe ishushu yamanzi kampompo
Imiyalelo epheleleyo Ngaphezu »
I-Alum Crystals elula
Amakristali e-alum amacwecwe acacileyo akhula kwiipramamidi kunye nezinye iifrime. Enye yeeprojekthi ezithandwa kakhulu kukuxuba i-alum kunye namanzi kunye kunye nokuthulula isisombululo phezu kwelitye elincinci ukwenza "idayimane".
2-1 / 2 iipunipoon
I-Alum Crystal Imiyalelo Engaphezulu »
Ukuhlasela kwamaSulumane eNtshona Yurophu: I-732 iMfazwe yeeNdwendwe
7 Leotards ezihluphekileyo
Yiyiphi Inkunkuma! UkuLahlwa kweNkunkuma kunye nokuSebenza
I-10 yeeNtshumayelo zeSizwe eziPhambili
I-Matzah efihliweyo: Afikomen kunye nomsebenzi wayo kwiPasika